Saraakiisha waxay u arkaan Utica Harbor inay u tahay Biyo-La'aan - Ellicott Dredges
Waxaa laga yaabaa 3, 2013
Source: Maanta Waxaa Bilaabey DAN MINER
UTICA, NY (WKTV) - Laba sano gudahood, waxaad bilaabi doontaa inaad aragto makhaayadaha, dukaamada tafaariiqda iyo hudheelka ka soo baxa Uborka Harbor.
Kala go'ida dekada ayaa bilaabatay Sebtember waxaana loo malaynaayey inay sii socoto sanadka cusub. Si kastaba ha noqotee, Magaalada Utica iyo saraakiisha gobolka ayaa helay hadiyad Kirismaskii hore Khamiista.
Carmella Mantello, oo ah Agaasimaha Hay'adda Kanaalka ayaa tiri: "Waxay ku sameeyeen waqti rikoor ah. Waxaan qiyaasnay ​​qiyaastii afar bilood si aan u soo caaryo. Waxay ku sameeyeen wax ka yar laba bilood. ”
"Ma aysan qaadan qandaraas gaar ah," ayay tiri haweeneyda Golaha ka tirsan RoAnn Destito. Waxaan shaqaalaheena shaqaalaysiinay inay shaqeeyaan waxayna muujiyeen inaysan kaliya laheyn xirfada, waxay leeyihiin khibrad ay kuqaban karaan shaqadan - kaliya maahan waqtiga diiwaangalinta, laakiin waqtiga tayada. ”
Wadada Utica Harbor, oo ku taal Waqooyiga Genesee Street, looma isticmaalin sanadihii 30. Qaar badan oo idinka mid ah malaha waxay dib u xasuustaan ​​duqii hore ee Utica oo kahadlaya awooda dekeddu leedahay
"Labada sano ee soo socota, waxaan arki doonnaa degelkan oo loo wareejiyay Magaalada Utica iyo waxa aan rajeyneyno in si aad ah loogu isticmaalo dhulkan," ayuu yiri Mantello. “Waxaan rajeyneynaa inaan aragno raadadka dhulka, meel socod, laga yaabee marina. Qaar ka mid ah horumarka adeegsiga badan, ganacsiga, madadaalada dadweynaha iyo meelaha laga helo dadweynaha halkan Harborka Utica. ”
Xirmooyinka yar yar ee loo yaqaan '83,000 cubic cub' ayaa la kala dareeray, oo qufulkii dib ayaa loo furay. Duqa Magaalada Roefaro ayaa ugu yeeray markan guul muhiim ah.
"Tani waxay dib u soo nooleyn doontaa Utica," ayuu yiri Duqa magaalada Roefaro. “Tani waxay naga dhigeysaa magaaladii cusbooneysiinta ee aan ognahay inaan noqon karno, tanina waxay dib noogu celin doontaa khariidada. Waxaan noqon doonnaa meesha loo socdo, kaliya maahan degmada Oneida, laakiin gobolka New York oo dhan. ”
Warshad soosaarta tamarta ayaa mar istaagtay goobta, sidaa darteed National Grid ayaa door weyn ka ciyaaraysa howlaha nadaafadda. Waa qiimaheedu kor u dhaafay $ 100,000,000.
Waxaa dib looga daabacay WKTV
Doomaha hadda waxay awoodi doonaan inay ku shiraacdaan Harborka Utica iyadoon laga baqaynin inay hoosta ka baxaan. Masuuliyiintuna waxay rajaynayaan inay taasi la macno tahay ganacsi iyo madadaalo mashquul badan meelaha u dhow Waqooyiga Utica. Agaasimaha Hay'adda Kanaalka Gobolka Carmella Mantello ayaa ku dhawaaqday Khamiista in la dhammaystiray qodihii kanaalka.
Waxay ahayd markii ugu horreeysay ee sannadihii 30 in la soo uruuriyay siltarka iyo tallaabada ugu dambaysay ee hannaanka nadiifinta ballaaran ee Harbor Point iyo dibu dhiska.
In kasta oo shaqaalaha shirkadda Canal Corp. ay ku bixiyeen bilihii ugu dambeeyay dekeda iyo qoorta, nadaafadda ay dowladdu waajibisay waxaa badanaa lagu qabtay National Grid, kaasoo ku kacaya qiyaastii $ 100 milyan oo doolar si loo sameeyo.
"Waxaan hadda hal talaabo u dhowaanay inaan u rogno xaqiiqo hiigsiga deked mashquul ah, oo leh waxyaabo guud iyo kuwa gaar loo leeyahay," ayuu yiri Mantello, oo ay ku wehelinayeen mas'uuliyiinta kale ee maxalliga ah iyo kuwa gobolka shir jaraa'id Khamiistii dekedda.
Harbor Point waa goobta qorshayaasha hamiga leh loogu talagalay saraakiisha magaalada. Sida ku xusan sharciga gobolka ee lagu ansaxiyay 2008, qaybta 10-acre Inner Harbor ee xarunta 140-acre waxaa loo wareejin doonaa hay'ad horumarineed oo ay magaaladu maamusho marka nadiifinta la dhammaystiro, oo ah tallaabo laga yaabo inay weli ku dhowdahay sannad-iyo-a- kala badh, Mantello ayaa yidhi.
Tan kale, National Grid, Waaxda Ilaalinta Deegaanka iyo Shaqaalaha Canal Corp ee gobolka ayaa ka shaqeyn doona dhammaystirka nadiifinta.
Markii la dhammeeyo, shirkadda ay magaaladu sameysay waxay raadin doontaa horumariyayaal u hoggaansamaya aragtidooda ku saabsan isku dhafka adeegyada ganacsiga, degenaanshaha iyo madadaalada goobta.
“Meesha ay biyo ka jiraan, waxaa ku yaal ganacsi iyo horumar dhaqaale,” ayuu yiri duqa magaalada David Roefaro. Dad badan ma oga sida mashruucani muhiim u yahay.
Goobta ayaa faddaraysay warshado taxane ah oo ku teedsan Jasiiradda Harbor Point. 1920-yada, goobtu waxay ahayd meesha ugu weyn ee soosaarka tamarta laga dhaliyo Waqooyiga Ameerika, sida laga soo xigtay National Grid.
Duqa magaalada ayaa tilmaamay mashaariicda horey uga dhacay deegaanka ku xeeran, ooy kujiraan soo jeedin Holiday Inn Express. Horumariyayaal kala duwan ayaa waliba iibsaday guryo isla markaana qorsheynaya in ay dumiyaan qaab dhismeedka warshadaha si ay ugu sii socdaan horumar ka imaan kara agagaarka.
Makhaayad Nicky Doodles wuxuu ka furi doonaa 51 N. Genesee St., Roefaro wuxuu yiri soosaarahan ayaa qorsheynaya inuu dhigo meel laga soo galo meesha Chenango Import Motors uu fadhiyey ilaa uu xirnaa sanadkii hore.
Shirka jaraa'id ee Khamiista waxaa sidoo kale ka soo qayb galay haweeneyda ka tirsan Golaha Degaanka ee RoAnn Destito, D-Rome, iyo Sen. Joseph Griffo, R-Rome.
Destito ayaa u mahadceliyay shaqaalaha shirkadda 'Canal Corp' ee sameeyay qashin-galka, isaga oo sheegay in ay badbaadinayso lacag aan lagu kireyn shirkad ka baxsan shaqada.
Waxaa laga soo qaatay Dredging Maanta